Momba ny Aasraw Biochemical Technology Co.,
Ny AASraw vao haingana dia nahazo fampindramam-bola manan-danja, ary nahasarika mpanamboatra kalitao tsara indrindra, ny ankamaroany dia ny fanamafisana ny indostrian'ny biochemika. Amin'ny alalan'ny famatsiam-bola mahomby amin'ny famatsiam-bola voalohany, dia nampidirina fitaovana tsara indrindra ho an'ny fitaovana, fanadiovana ary fandalinana ny tsipika. Isika dia laboratoary manerantany feno, fa tsy mpividy ny orinasa hafa. Manana fitaovana feno izahay, anisan'izany ny fanatsarana ny kalorimetim-pifanarahana, ny chromatographie manara-penitra, ny spektroskopie amin'ny infrarozia, ny spectroscopie ultraviolet hita etsy sy eroa. Ampiasain'ny teknolojia maoderina mihoatra ny roapolo izao. Ny fanananay dia mihoatra ny telopolo tapitrisa dolara amerikana.
Taorian'ny teny faneva hoe "Fahendrena, Finoana, Fanompoana", AASraw dia manolotra entana manana toetra miavaka, vidiny ambany, ary fahombiazana tanteraka amin'ny fanampiana tsara kokoa manerana izao tontolo izao. Ny vokatra rehetra avy amin'ny AASraw dia omena amin'ny fahamendrehana tsy latsaky ny 98%, ary ny rehetra dia fehezina araka ny ISO9001, UPS 36, BP2016, EP6, GMP na mari-pankasitrahana hafa raha ilaina mba hihaona ny fenitra takian'ny firenena entana.